‘भुईंमान्छे’ प्रिमिरमा कसरी भए भुईंभरी मान्छे ? « Ramailo छ
‘भुईंमान्छे’ प्रिमिरमा कसरी भए भुईंभरी मान्छे ?
समय : 7:32 am
यही शुक्रबार, भदौ २ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘भुईंमान्छे’ को मंगलबार प्रिमियर गरिएको छ । कमलपोखरीस्थित बिग मुभिजमा गरिएको फिल्मको प्रिमियर शोमा सिट क्षमता भन्दा दोब्बर पाहुंन आउँदा साढे दुई सय सिट भएको हलमा ‘भुईंभरी’ मान्छे भए । सम्भवतः पहिलो पटक प्रिमियर शोमा त्यति धेरै संख्यामा हलको सिट र भुईंभरी दर्शक देखिए ।
कसरी आए त ‘भुईंमान्छे’ प्रिमियरमा यतिको धेरै पाहुना ? ‘घरको एक जनालाई बोलाएको सबै आउनु भएछ’, फिल्म निर्माण टिमको सदस्यले ठट्यौली गर्दै भन्दै थिए, ‘निम्तो त चुले नै पुगेछ !’ कमै दर्शक मध्यान्तरमा निस्किएपनि धेरै जसोले भने भुईंमै बसेर पुरा समय ‘भुईंमान्छे’ हेरे । प्रिमियरमा सहभागी फिल्म मन परेको प्रतिक्रिया दिए ।
नवराज बुढाथोकीको निर्देशन रहेको फिल्म ‘भुईंमान्छे’ मा कलाकार रमेश बुढाथोकी र भलिबल खेलाडी सिपोरा गुरुङको मुख्य भूमिका रहेको छ । निरुपाराज्य लक्ष्मी थापाको निर्माण रहेको फिल्ममा रोहीनी भट्टराई कार्यकारी निर्माता रहेकी छिन् । फिल्म पोस्ट मार्टम गर्ने व्यक्तिको कथामा आधारित छ ।